Kooxaha reer London oo ku dagaalamaya saxiixa xiddiga Barcelona ee Miralem Pjanić – Gool FM
Kooxaha reer London oo ku dagaalamaya saxiixa xiddiga Barcelona ee Miralem Pjanić
(London) 05 Luulyo 2021. Waxay u muuqataa inuu soo dhammaanayo safarka khadka dhexe reer Bosnia Miralem Pjanić ee kooxda Barcelona, kaasoo aan ku soo bandhigin wax qabad wanaagsan, tan iyo markii uu kaga soo biiray Juventus sanadkii hore.
Sida laga soo xigtay warbixin uu daabacay wargeyska Isbaanishka ah ee Marca, Miralem Pjanić oo wax boos ah ka waayay qorshaha tababare Ronald Koeman ayaa qarka u saaran inuu ka tago kooxda.
Warbixinta ayaa tilmaamtay in kooxaha ka dhisan caasimada London ee London ee Chelsea iyo Tottenham Hotspur ay ku biireen loolanka loogu jiro saxiixa Miralem Pjanić, waxaana sidoo kale loolanka ku wehliya Juventus iyo Manchester United.
Miralem Pjanić ayaa Barcelona kaga soo biiray Juventus bishii 1-da Sebtember ee 2020, tan iyo markaasna wuxuu ka qayb galay 30 kulan oo tartamada oo dhan ah, isagoo aan wax gool ah dhalin ama caawin.
Xulka qaranka Brazil oo markii labaad si xiriir ah u gaaray fiinaalka Copa America kaddib markii uu garaacay xulka Peru